မေမေတိုင်း ရင်ခုန်စွာ စောင့်ဆိုင်းကြတဲ့ ဘေဘီလေး မွေးဖွားမယ့်အချိန် - Hello Sayarwon
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကျန်းမာရေး » ကလေးမွေးဖွားခြင်း
Update Date ဒီဇင်ဘာ 15, 2020 .2mins read
မေမေတစ်ယောက် ဖြစ်ရတာ မလွယ်ပါဘူး။ ကျော်ဖြတ်ရတဲ့ အခက်အခဲ များစွာနဲ့ပါ။ ကိုယ်ဝန် စရှိပြီလို့ သိချိန်ကစပြီး ကိုယ်တိုင်ရော ဗိုက်ထဲက ဘေဘီလေးပါ ကျန်းမာစေဖို့ ဂရုစိုက်ရတဲ့ အရာတွေက အများကြိးပါ။ အနေအထိုင် အစားအသောက်ကစလို့ပေါ့။
ကိုယ်ဝန်ရှိပြီလို့ လက္ခဏာတွေ တွေ့ရပြီဆိုတာနဲ့ ဘေဘီလေး ရှိနေပြီလားဆိုတာကို စစ်ဆေးရပါတယ်။ ဆီးစစ်တံ သုံးပြီး စစ်တာရှိသလို ဆေးခန်းကို သွားပြီး ဆီးစစ်တာမျိုး လုပ်ရတာလည်း ရှိပါတယ်။
ကဲ ကိုယ်ဝန်ရှိပြီ သေချာပြီဆိုတော့ မေမေတွေ ထပ်သိချင်တာတစ်ခုက ဘေဘီလေးကို ဘယ်တော့ မွေးမလဲဆိုတာပေါ့။ ဒီတော့ ဘာလုပ်ကြသလဲဆိုရင် ဆရာဝန်ကို ပြသပြီး ( ဗိုက်အပ်ရင်း) မွေးဖွားမယ့်ရက် (Due Date) ကို တွက်တာလေ။
ဒါက တကယ်လည်း သိသင့်တဲ့အရာပါ။ မေမေအနေနဲ့ ဘေဘီလေးကို ဘယ်နေ့ ဘယ်လမှာ မျက်ဝါးထင်ထင် မြင်ရမလဲဆိုတာက သိသင့်တဲ့ အချက်ပါ။ ဒီလို သိမှလည်း ကိုယ်ဝန်ဆောင် ကာလတလျှောက် လိုအပ်တဲ့ စစ်ဆေး စောင့်ရှောက်မှုတွေကို အချိန်ကိုက် လုပ်ဆောင်နိုင်မှာလေ။
ဘေဘီလေးနဲ့ မေမေတို့အတွက် အရေးပါတဲ့ Due Date ( မွေးဖွားမယ့်ရက်)
မေမေ့ အနေနဲ့ ဘေဘီလေးကို စလွယ်ထားရပြီဆိုတာနဲ့ ပထမဆုံး အကြိမ် အယ်လ်ထရာဆောင်း မရိုက်ခင်မှာ အရင်ဆုံး လုပ်ရမှာက မွေးဖွားမယ့်ရက် (Due Date) ကို တွက်တာပါ။
ဘေဘီလေးရဲ့ မွေးဖွားမယ့်ရက် (Due Date) က အလွယ်ဆုံး ပြောပြရရင် မေမေ နောက်ဆုံး ရာသီသွေးပေါ်ခဲ့တာရဲ့ နောက်ထက် ရက်သတ္တပတ် ၄၀ ပါ။ ဒါကိုမမှတ်မိဘူးဆိုရင်တော့ Due Date Calendar လေးသုံးပြီး ကိုယ်တိုင် တွက်ချက်လို့ ရပါတယ် မေမေ။
ပထမဆုံး အယ်လ်ထရာဆောင်း ရိုက်ယူပြီးတဲ့အခါ အိုဂျီက ဘေဘီလေးရဲ့ အရွယ်အစားကို တိုင်းတာရယူတာ၊မွေးဖွားမယ့်ရက်ကို တိတိကျကျ တွက်ချက်ပေးတာမျိုး လုပ်ပေးပါတယ်။
ပထမဆုံးအကြိမ် အယ်လ်ထရာဆောင်း ရိုက်တဲ့အခါ အိုဂျီက မြေပဲဆန်ပုံစံ ဘေဘီလေးရဲ့ ကြီးထွားမှုကို တိုင်းတာပေးရင်း ချိုမြိန်လှတဲ့ ဘေဘီလေးရဲ့ နှလုံးခုန်သံကို နားထောင်နိုင်ဖို့ လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒီကာလက ကိုယ်ဝန် ၅ ပတ် ကနေ ၆ပတ်လောက်ရှိနေပါပြီ။
မွေးဖွားမယ့်ရက် သေချာ သိပါစေ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ မေမေတစ်ယောက်အနေနဲ့ စစ်ဆေးရမယ့် ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးမှုတွေ ရှိသလို ထိုးနှံရမယ့် ကာကွယ်ဆေးတွေလည်း ရှိပါတယ်။ အားဆေးသောက်တာက စလို့ပေါ့။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ လုပ်ဆောင်ရမယ့် စစ်ဆေးမှုတွေကို အကုန် ပြည့်စုံအောင် လုပ်ဖို့လိုသလို အချိန်ကို အတိအကျ လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့လည်း လိုပါမယ်။ အချို့သော ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် ခံယူရမယ့် စစ်ဆေး စောင့်ရှောက်မှုတွေက အချိန် လွဲလို့ မဖြစ်ပါဘူး။ ဒါတွေကို အချိန်ကိုက် လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ ဆိုရင် Due Date ကအရေးကြီးပါတယ်။
တကယ်လို့ မွေးဖွားမယ့်ရက်ကို သေချာ မတွက်ချက်ထားဘူးဆိုရင် လိုအပ်တဲ့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေ စစ်ဆေးမှုတွေကို အချိန်ကိုက် မလုပ်နိုင်ဘဲ မေမေ့မှာ နောက်ဆက်တွဲ ကျန်းမာရေး ပြဿနာတွေ ရှိလာနိုင်သလို ဘေဘီလေးရဲ့ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုကိုလည်း ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် မေမေရော ဘေဘီလေးပါ ကျန်းမာစေဖို့အတွက် မွေးဖွားမယ့်ရက် (Due Date) ကို သေချာသိဖို့ လိုပါမယ်။
ဘေဘီလေး မျက်နှာမြင်ရမယ့် မေမေတို့ ရင်ခုန်စွာ စောင့်ဆိုင်းရတဲ့ ရက်ကလေးကို Helloဆရာဝန်ရဲ့ ဒီ Due Date Calendar အက်ပ်လေးမှာ ကိုယ်တိုင် တွက်ချက်ကြည့်လို့လည်း ရပါတယ် မေမေ……….
Why are due dates so important? https://www.stuff.co.nz/life-style/parenting/pregnancy/74144622/why-are-due-dates-so-important Accessed Date3December 2020
What experts want you to know about your due date https://www.mother.ly/life/pregnancy-due-date-accuracy Accessed Date3December 2020